Saizi yepasi: 952 Sq feet
Mwaka wekuvaka: 1930
Zvimiro: Heating Features: Central Air-Elec, Central Heat-Gas, Parking Features: Side
Ona iri Razvino Rehabbed Furemu Imba ine 3 yekurara, maviri mabhati, pane yakanaka hombe mijenya ine yekuchengetedza chivakwa kunze kumashure. Imba ino ine newish midziyo yemukicheni, yakanamirwa pasi pehuni mukugara, kicheni, mukoridho, uye dzimba dzekugezera uye ichangobva kuiswa kapeti mumakamuri ekurara, kupisa kwepakati nemhepo zvakaiswa, uye zvichangobva kupendwa mukati nekunze. Imba ino inowanikwa munzvimbo dzakare dzakasimbiswa padyo nezvikoro zvemuno, nzvimbo dzekutenga, machechi, paki, uye maresitorendi. Kuwana nyore Hwy 80 uye I-20 kune vafambi. Ratidza uye uunze zvinopihwa.
Bata mushambadzi 888519xxxx